Nhau - YAKASIMBATSA Mubatanidzwa, VOLVO TRUCKS NEXCMG MOTO FOMU YEMAHARA MUTSANGANO
KUSIMBIRA KWEMAHARA, VOLVO TRUCKS NEXCMG FIRE FOMU YEMAHARA MUTSANGANO
Musi waZvita 10th, Li Qianjin, maneja mukuru weXCMG Moto Chengetedzo Equipment Co, Ltd. (ino inonzi kunzi XCMG Moto Dziviriro), uye Dong Chenrui, purezidhendi weVolvo Marori China (anozivikanwa kunzi Volvo Marori), akasaina zano kubvumirana chibvumirano muXuzhou. Izvi zvinoreva kuti Volvo Matiraki ave pamutemo kuita shamwari yeXCMG Moto.
Mumakore maviri anotevera, XCMG Moto ichatenga angangoita mazana maviri Volvo FMX akasarudzika echassis mamodheru kubva kuVolvo Matiraki akanyatsogadzirirwa mauto ekudzimisa moto. Li Qianjin, maneja mukuru weXCMG Fire Safety Equipment Co, Ltd. akataura zvakanyanya nezve mubatanidzwa uripo pakati pemapato maviri aya: “Volvo Marori inzvimbo inozivikanwa pasi rese yekutengesa mota. Volvo Marori anozivikanwa nekuchengetedza kwayo, kugona, uye simba rekuchengetedza. Kusarudza Volvo inorema chassis yekuwedzera musika wepamusoro weXCMG Moto Sosi yekusiyanisa yekuvaka zita rinotungamira muindasitiri iyi yakanaka uye yakakosha kukosha. "
Dong Chenrui anobvumirana zvakadzama: "Kupa vashandisi veChina michina yekuvaka yakachengeteka, inoshanda uye yakavimbika chassis yakakosha ndicho chinangwa cheVolvo Marori. kushandira pamwe kunoita kuti tiite zvinangwa zvakasimbiswa uye nhanho huru kumberi. Mota dzeVolvo dzichashanda padhuze nemoto weXugong, kubvisa zvachose kunetsekana nevemhando dzemoto vachishandisa Volvo chassis rori, chinova icho chinangwa chekupedzisira chekudyidzana kwedu kwehunyanzvi. "
Yakagadzirirwa vashandisi veChina moto vanogadzira yakasarudzika chassis
XCMG Moto yakatengwa nguva ino ndiyo Volvo FMX yakasarudzika chassis iyo yakamhara zviri pamutemo muChina muna 2014. Muna 2014, chizvarwa chitsva cheVolvo rori akateedzana chakanyoreswa kuChina. Pakati pavo, iyo FMX modhi inogona kunzi ndeye off-highway chassis modhi yakanyatsogadzirirwa neVolvo Marori emusika wekugadzira michina. Iine zvakanakira kugadzikana, kuchengetedzeka, kuvimbika, hupfumi hwehupfumi uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Dzikama gadzirisa nharaunda dzakasiyana dzakaomarara uye inozivikanwa se "yeinonyanya kusimba mainjiniya mota chassis".
Dong Chenrui, Mutungamiri weVolvo Trucks China (wechipiri kubva kurudyi), naLi Qianjin, maneja mukuru weXCMG Fire Protection (wechipiri kubva kuruboshwe) nevamwe vatungamiriri vakatora.
mufananidzo weboka mune chirimwa chitsva cheXCMG Moto Dziviriro. Setirori rinorema-basa rakagadzirirwa kuvakwa kweinjiniya, iyo FMX nhepfenyuro yakaunzwa muna2010. Mukaha uri mumugwagwa we off-highway mota. Shure kwaizvozvo, ichi chigadzirwa chakave chakakurumbira chigadzirwa mumusika weChina uye chakava chinoenderana chigadzirwa kune mazhinji michina yekuvaka mainframe makambani.
Dong Chenrui akataura kuti kuvimbika kwakakwira kweVolvo Marori kwakakosha mukuita kwemugwagwa, uye kune zvakawanda zvinobatsira mukununura moto, kunyanya kana uchiita kununura moto mumamiriro ezvinhu ekurumidzira. Kuvimbika kukuru kwemotokari dzinodzima moto kwakanyanya kukosha. Maminitsi uye sekondi imwe zvinoreva kuti hupenyu hwakawanda nepfuma zvinogona kuponeswa.
Iyo XCMG moto rori yakarongedzwa neVolvo rori chassis iri
kwete izvozvo chete, asi Volvo rori zvakare ine yakanakisa kubata mashandiro. Mudhiraivho unoshandisa yakasarudzika steering system (VDS), uye mutyairi anogona kuwana kudzora kwechiedza nemunwe mumwe chete. Iyi irori remoto Mutyairi anogona kutyaira mota zvakadzikama kunyangwe pasi pemamiriro ezvinhu akaomarara, ayo anopa mukana wekusvika kwairi kuenda nekukasira.
Joinha mauto kuti uwedzere iwo wepamusoro-magumo musika.
XCMG Moto Kurwisa ibasa rakazara-muridzi reXCMG Boka. Iyo ine anopfuura makumi matanhatu emhando yezvinhu zvekudzimisa moto muzvikamu zvitatu: kusimudza marori emoto, akazvipira marori ekudzimisa moto, uye kununurwa kwechimbichimbi. Iko kutengeswa kwezvigadzirwa kwakaratidza chinzvimbo chekutanga muChina kwemakore mazhinji, uye iri rekutanga rinozivikanwa bhizinesi muChina kupinda mumunda wedziviriro yemoto.
Rori yemoto yeXCMG yakagadzirirwa Volvo FMX chassis inoratidzwa pamutambo wekusaina
akataura nezve izvo zvinhu zvine chekuita nekisesi yerori remoto. Li Qianjin, maneja mukuru weXCMG kudzimisa moto, akati, "Matiraki emoto idzimotokari dzakakosha dzine basa rakakosha rekununura uye kununura uye dzinofanirwa kunge dzisina huchenjeri. chinangwa chedu chiri pachena, sarudza Volvo rori chassis mupiki kuti aite kusangana nepamusoro pevanoenda kumoto wevanodzima moto, huwandu hwehupfumi hwehupfumi, hwakanyanya kuchengetedzwa zvinodiwa, uye Volvo semhando dzinozivikanwa dzepasirese dzemotokari dzekutengesa, kuzadzisa zvizere aya mamiriro. "
Muchokwadi,, XCMG Moto uye Volvo Marori ane nhoroondo refu. Muna 2017, XCMG Moto Kurwisa yaidikanwa kugadzira hombe-vhoriyamu moto rori kune petrochemical masisitimu, ayo aida simba rakakwira, kumhanya kwazvo, uye zvakanyanya zvakanyanya zvinodiwa pakuita kwechassis. Pakusarudza iyo National V chassis, Volvo Marori FMX540 yakamira pakati pevazhinji vatengesi vechassis uye ikave iyo yekupedzisira mukundi. Kubva ipapo, Shuangyi akatanga kupinda mu "honeymoon period." Parizvino, angangoita ese zvigadzirwa zvakagadzirwa neXCMG Moto Kurwisa zvakagadzirirwa neVolvo rori chassis, uye chikamu chekutsigira Volvo chassis chasvika 70%. Achitaura nezvehukama neVolvo Trucks, Li Qianjin akapfupikisa mumutsara mumwe chete: “Kune misika inoda kuva nezvigadzirwa zvakakodzera. Ichi ndicho chikonzero nei takatanga kusarudza Volvo chassis. ”
Dong Chenrui akati Volvo Marori haangopa chete XCMG Moto Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, asiwo kupa vatengi huwandu hwakazara hwehukama hwepedyo masevhisi. Kunyangwe ikasangana neyakagadziriswa, Volvo ichatumira rakasimba mushure mekutengesa sevhisi timu kuti ibate nayo nekukurumidza sezvinobvira kuti ive nechokwadi chekuti mota iri kugara iri mune yakanakira mamiriro. Kusvika pari zvino, Volvo Matirori ane makumi masere nematanhatu ebasa mumusika weChinese, achigadzwa kutanga pakati peanotengeswa kunze maraki. Muna 2021, Volvo Matiraki anoenderera mberi nekuwedzera kumhanya kwekuvaka netiweki yebasa, uye kuyedza kune vamwe vanopa mhando yepamusoro kuti vabatanidze sisitimu yeVolvo Marori.
Mukurumbira-wakavakirwa, ramba uchiwedzera kudzamisa pamwe nemakambani anotungamira muindasitiri
Se inozivikanwa inozivikanwa yepasirese yekutengesa mota chiratidzo, Volvo Marori ndiyo yekutanga kambani yerori yekuwedzera Chinese yekuvaka michini musika uye yekutanga kambani kugadzirisa yakasarudzika chassis yeiyo yekuvaka michini indasitiri. Sezvo Volvo Marori akatangisa yakasarudzika FMX chassis yakagadzirirwa vashandi vekuvaka michina muChina muna 2014, yakahwina kuvimba kwevashandisi mumusika weChina wekuvaka michina uye yakaita chinzvimbo chakanaka mukuenderera mberi nekuwedzera musika wekuvaka weChina. Kubva pakupera kwaNovember 2020, bhizimusi reVolvo Marori muChina rave nekukura kwegore-ne-gore kukura kwe64%, iro iro chikamu chemuchina wekuvaka chaita zvakanyanya.
Pamhemberero yekusaina, XCMG Moto General Manager Li Qianjin (wekutanga kubva kuruboshwe) uye Volvo Marori China Mutungamiri Dong Chenrui (wekutanga kubva kurudyi) vakapanana zvipo ndokutora mufananidzo weboka.
Mumunda wekuvaka michina chassis rutsigiro, ramba uchisimbisa zvakadzama kudyidzana nemakambani anotungamira muindasitiri. Volvo Marori 'anoramba aripo chinangwa.
Achitaura nezve zvirongwa zvekutsigira zve2021, Li Qianjin akati mune ramangwana, iyo yose nhevedzano yeXCMG Moto Kurwisa zvigadzirwa ichaita zvinogadziriswa zvigadzirwa neVolvo Marori. Achitaura nezve tarisiro yekubatana pakati pemapato maviri aya, akashandisa "vechidiki kuti vadanane" sedimikira rekufananidzira: "Kubva pakuzivana kusvika pakuzivana, ichi chiitiko chekudzika zvishoma nezvishoma, kudzamara tazokwegura pamwe chete. ”
Dong Chenrui akati musika weChinese ndiVolvo Global Chikamu chakakosha chechirongwa, Volvo Marori anozvipira kuunza basa riri nani uye ruzivo rwevashandisi kuvashandisi vechiChinese mune ramangwana, vachitarisira kubatana nemakambani eChinese ane simba uye anorota kuti vagadzire zvirinani. ramangwana.